Fiarahana tsy nisoratra anarana amin'ny finday amin'ny sary maimaim-poana
Fiarahana tsy nisoratra anarana amin’ny finday amin’ny sary maimaim-poana
Mitady vehivavy ho an’ny fifandraisana akaiky ny hahavony ny lanja ny ara-dalàna ny bika ho azo atao fifandraisana matotra isika raha toa ka mitovy ny samy hafa Mendrika, tsy manimba ny fahazarana. Tsy hamadika ny olona dia tsy hiala amin’ny olana. Tiako ny manjaitra, raiki-pitia, ny asa amin’ny ny tetika, toy ny sarimihetsika, ny vaovao. Te-hihaona mendrika ny olona, tsy tia ady, tsy mandeha, tsy mamo. Mba hanorina fiaraha-mientana ifampizarana fahatakarana. Mendrika, tsy manimba ny fahazarana. Na oviana na oviana ny olona dia tsy hamadika.
Ny asa amin’ny ny tetika. Tia mamaky boky, mijery sarimihetsika, ny vaovao.
Te-hihaona mendrika ny olona
Tsy tia ady, tsy mandeha, mba hajao ny tenanao sy ny vehivavy dia ny fahazavan-tsaina. Mitady ao an-toerana ny olona-Slav — ny fanahy vady ho an’ny fifandraisana matotra avy any Sochi-Adler-tompon ‘ ny Maro. Anao: ny efa-polo amby dimam-polo taona, mitombo avy zato ny dimy amby fitopolo, lanja ny dimy amby valopolo, nisara-bady, raha tsy misy ankizy, tsy misy fahazaran-dratsy, ara-toekarena, amin’ny toetra ara-dalàna. Izaho: efa-polo amby enin-taona, avo zato, enim-polo amby efatra, ny lanjan’ny dimam-polo amby fito, nisara-panambadiana, ny olon-dehibe ny zanaka, dia tsy manana fahazaran-dratsy, amin’ny toetra ara-dalàna, fiantsenana, ary bebe kokoa amin’ny fifandraisana, ny sary rehefa taratasy. Izaho no tsara fanahy, marina ny vehivavy, raha tsy misy ny fahazaran-dratsy. Te — hivory hiaraka mendrika, tsy tia ady olona, tsy Gossim, tsy mamo.
Hihaona eto sy ny ankehitriny tsy misy fisoratana anarana sy ho maimaim-poana momba ny ‘Antsasa’ ny telefaonina sy ny sary mahafinaritra. Jereo ny sary, ny hafatra, ary manampy ny. Izany, ary koa ny finday ny mpikambana ao amin ‘ ny toerana dia hanampy Anao ao amin’ny fohy indrindra azo atao ny fotoana mba hahitana namana vaovao. Antsasaky ny tsara indrindra Mampiaraka toerana miaraka amin’ny sary sy ny telefaonina isa izay afaka peruse maimaim-poana sy tsy misy fisoratana anarana amin’izao fotoana izao. Te-hihaona ankizivavy na ry zalahy an-tserasera sy chat, jereo ny sary sy ho afaka hiantso azy ireo eo amin’ny finday. Avy eo dia mampiasa ny endri-javatra ny toerana.
Ny antsasaky ny zato, hisoratra anarana ary hahazo maimaim-poana ny fidirana amin’ny rehetra ny tolotra ao amin’ny vohikala, izay isan-andro misy vaovao ny fihaonana eo amin’ny mpandray anjara manerana izao tontolo izao. Amin’izao fotoana izao miaraka amin’ny fanampian’ny asa fanompoana ‘ny fiaraha-miory’ afaka misafidy sary ny vavy sy lahy, hitsena azy, na dia hiantso azy ireo amin’ny alalan’ny finday maro. Miaraha aminay amin’izao fotoana izao
← Italiana Chat - Malalaka firesahana amin'ny efi-trano an-tserasera tsy misy fisoratana anarana, online chat
Italiana mampiaraka: hihaona tokan-tena amin'ny lova vato nasondrotry ny tokan-tena →